कस्तो करियर ? सफल कि सुखी ? - गजु Real - साप्ताहिक
कस्तो करियर ? सफल कि सुखी ?
धेरै आफन्त सफल बन्न सुझाव दिन्छन् तर सफलताको सूत्र थोरैले मात्र सिकाउँछन् । सिकाउनेहरू भन्छन्, सफलता नै जीवनको मूल लक्ष भनिन्छ, तर यो विश्लेषक भन्छ, सफलता मात्र जीवनको लक्ष्य हुनु हुँदैन, त्यसको अर्को साथी पनि जोड्नुपर्छ, खुसी । खुसीका साथमा सुख पनि जोड्न सकियो भने त्यो सफलता दीर्घजीवी हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ ।
सफलता मात्र शान्तिको आधार होइन । चिने–जानेका सफल व्यक्तिको अन्तर–कुन्तर चियाएर हेर्नुहोस्, तिनीहरूमा सफलताको गन्ध त भेटिन्छ तर सुखको सुगन्ध कम हुन्छ । सफलता जीवनको तत्कालीन लक्ष्य हो भने सुख अन्तिम लक्ष्य बन्नुुपर्छ । मेरा धेरै डाक्टर साथी छन् । उनीहरू भन्छन्— यार, मलाई पनि कलाकार बन्ने इच्छा थियो, दुभाग्यले यता आइयो ! इन्जिनियरहरू भन्छन्, मेरो त वकिल बन्ने चाहना थियो, तर यस्तो भइयो । व्यापारीहरू भन्छन्, म त नाफामूलक होइन, सेवामूलक काममा जानुपर्ने मान्छे तर कसरी हो कुन्नि व्यापारी भइयो ।
तपाईंले सफल मानेका व्यक्तिहरू बाहिरबाट साँच्चिकै सफल छन् । उनीहरूसँग नाम छ, दाम छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, यद्यपि गहिरिएर हेर्दा उनीहरू सफल त छन् तर सुखी छैनन् । सबै थोक भएर पनि असन्तुष्ट हुनुलाई पूर्ण सफल भनिँदैन । सफलता भित्र र बाहिर दुवैतिर हुनुपर्छ भन्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
पाएर पनि नपाएजस्तो, भएर पनि नभएजस्तो यो कस्तो सफलता ? गजुरियल विश्लेषण भन्छ, हामीलाई सफल हुन सिकाइयो तर सुखी बन्न प्रेरणा दिइएन । डाक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनियो तर खुसी हुनुपर्छ भनेर कसैले मोटिभेसन गरेन । फलत: हामीले सफलताको यात्रा त गर्‍यौ तर खुसीलाई बाटैमा छाडिदियौं ।
सफल बन्ने ज्वरोले भेटेपछि हामीलाई सुखको सम्झनै रहेन । सफल बन्न संघर्ष गर्‍यौं । संघर्ष स्वभावत: सकसपूर्ण हुन्छ । ठूलो मेहनतले सफल त भयौं तर सफल हुँदा पनि हामीलाई डरले कहिल्यै छाडेन । विफल भइएला भन्ने त्रास सधैं रह्यो । प्रकृतिको खेलअनुसार एक दिन सफलताबाट अलिकति तल झर्‍यौं । तल झर्नुको पीडाले झन्–झन् सताउन थाल्यो ।
गजुरियल विश्लेषण भन्छ, सफलताको बाटो एक्लै हिंड्नु हुँदैन । एक जना साथी साथ हुनैपर्छ । त्यो साथीको नाम हो— खुसी । खुसीका साथमा संघर्षको बाटो तय गर्ने । सफलता मिल्यो भने खुसी अझ खुसी हुन्छ । सफल बन्न अलिकति समय लाग्यो भने पनि खुसीले हामीलाई सहयोग गर्छ । विफलतामा खुसीले भन्छ— भाइ, यो बाटो तेरो होइन रहेछ, अर्को नयाँ यात्रा खोज्न सिकाउँछ ।
साथी अनिसले साइन्स रोजेको हुनाले तपाईंले पनि साइन्स नै चुन्नुभयो भने सफलता र खुसी दुवै टाढा हुन्छन् । किनभने हरेक मान्छेभित्र अलग इच्छा, अलग सोच र अलग क्षमता हुन्छ । म के हुँ भन्ने कुरा आफैंले थाहा पाउनुपर्छ । अरूले उचालेका भरमा जीवनको लक्ष्य रोज्नु दु:खी जीवनको पहिलो खुड्किलो हो ।
सुखी र खुसी मानिसहरूसँग सोध्नुहोस्, उनीहरूको सफलताको रहस्य के हो ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ— मेरो इच्छा, पढाइ र पेसा एउटै भएकाले म सुखी र खुसी हुन सकेको हुँ । कलाकार बन्ने सपना बोकेको मान्छे, कमर्स लिएर पढ्छ अनि जागिरचाहिँ प्रहरी सेवामा खान्छ भने ऊ सफल त होला तर खुसी र सुखी हुन सक्दैन । आफ्नो भित्री आत्माले मागेअनुसारको अवसर, इच्छाअनुसारको पढाइ तथा पढाइअनुसारको पेसा नै सफल जीवन हो । यस्तो सफलतामा सफलतासँगै सुख र खुसी पनि साथै हुन्छन् ।